Millennials kunye neOmni-Channel yokuThengisa imikhwa
Ungayigcina njani iMillennials + Iindlela zabo zokuThengisa iiOmni-Channel
Ngee-smartphones kuzo zonke iipokotho, i-Millennials ixhotyisiwe kwaye sele iqhelile indlela entsha yokuthenga. Ngaphezulu kwe- $ 200 yezigidigidi kumandla okuthenga ngonyaka, i-Millennials liqela elibalulekileyo ukulungiselela; kodwa bathengisa kangakanani abathengisi njengoko behlaziya izicwangciso zabo zokuthengisa?
Ngelixa i-Millennials isonwabela ukuthengwa kwevenkile, iipesenti ezingama-85 zithanda ukusebenzisa izixhobo zazo eziphathwayo ukwenza iimveliso zaphambi kokuthenga. Abathengisi abakwaziyo oku bagcina ubukho babo kwi-intanethi bomelele kwaye basebenzise uphononongo kwinzuzo yabo. I-50% ye-Millennials iya kutyelela indawo yomthengisi xa inikwa isaphulelo sama-20%, ukanti iipesenti ezingama-72.7 zabathengisi aziboneleli ngamatikiti eselfowuni kubathengi babo. Abathengisi, abazisa ishishini labo kwikamva, ukutya kwi-Millennials kwizicwangciso zabo, baya kuyibona impumelelo kwiminyaka ezayo. Indawo yoRhwebo kuvavanywe ngaphezulu kwe-1,000 XNUMX labathengi kunye nabathengisi, beveza iziphumo zabo kwi-infographic engezantsi.
tags: millennialsumjelo-omniIvenkileiindlela zokuthenga